Fitsipika voalohany an'ny New Jersey ho an'ny tsenan'ny rongony fampiasan'ny olon-dehibe - Info momba ny fahazoan-dàlana
Fitsipika voalohany an'ny New Jersey ho an'ny tsenan'ny rongony fampiasan'ny olon-dehibe
Efa ho enim-bolana taorian'ny nanekena ny fampiasana marijuana fialamboly, New Jersey dia dingana iray manakaiky ny varotra ara-dalàna ao amin'ny fanjakana. Ny komity mifehy ny rongony New Jersey (CRC) fitsipika Navotsotra ny alakamisy teo ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana, mamaritra ny hoavin'ny indostrian'ny rongony.
Tsy fantatray hoe rahoviana no manomboka any New Jersey ny varotra rongony ara-dalàna, saingy nanambara ny tompon'andraikitra hoe ohatrinona ny vidiny hanombohana.
Ity misy topy topy maso kely momba izay naorin'ny Fitsipika voalohany an'ny CRC:
Ireo fitsipika vaovao dia manondro sokajy orinasa rongony telo izay homena tombana voalohany sy fankatoavana mandritra ny fizotran'ny fangatahana:
Orinasa ara-tsosialy ara-tsosialy, izay fananan'ny olona efa nomelohina noho ny heloka rongony na nonina tany amin'ny faritra sahirana ara-toekarena ao amin'ny fanjakana.
Orinasa maro samihafa, izay fananan'ny vitsy an'isa, fananan'ny vehivavy, na manan-kilema kilemaina ary eken'ny Departemantan'ny Tahirimbolan'ny New Jersey amin'ny iray na maromaro amin'ireo sokajy voalaza; SY
Ny Business Impact Zone, izay miorina ao amin'ny Zone Impact, dia fananan'ny mponina Impact Zone, na mampiasa ny mponina Impact Zone. Ny Zone Impact dia tanàna misy mponina marobe, tahan'ny tsy fananan asa betsaka, na heloka bevava marobe na fisamborana rongony.
Nametraka fiarovana ny lalàna mandrara ny fandrindrana ny fandraharahana araraotina sy ny famindram-pahefana diso lalana.
Ny lalàna dia mitaky ihany koa ny komisiona mba handoa ny saram-pialan-tsasatra ara-tsosialy, izay saram-pambolena izay manana fiakarana miakatra rehefa latsaka ny vidin'ny mpanjifa ary hanangona vola ho an'ny fandraisana andraikitra toy ny fanampiana ara-panabeazana, fampandrosoana ara-toekarena ary serivisy fanampiana ara-tsosialy ao amin'ny tanàna voatondro ho Zone Impact.
Fepetra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpanjifa
Ny lalàna dia mametra ny fidiran'ny latsaky ny 21 taona amin'ny orinasa rongony ary mametra ny fanaovana dokambarotra mba hampiroborobo ny olona rongony amin'ny ankapobeny. Ny orinasam-panafody dia tsy maintsy mifehy ny fofona, mifampiresaka amin'ireo mpifanila vodirindrina izay mety miahiahy momba ny fisian'izy ireo, ary mamolavola sy mampihatra paikady maharitra momba ny tontolo iainana.
Ny orinasam-panafody dia tsy maintsy manana mpiasa olona azon'ny mpifanila vodirindrina alefa hitatitra izay fanelingelenana mba hampiroboroboana haingana ny olana na fitarainana amin'ny manodidina. Ho afaka hanao tatitra mivantana amin'ny CRC mivantana ihany koa ny mponina.
Ireo mpiasa miasa ao amin'ny orinasa mpivarotra rongony dia antenaina hahatonga ny fitaovam-pianarana ho an'ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny fampahalalana momba ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana rongony, ny fampiasa amin'ny rongony azo antoka, ary ny famantarana ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina.
Ny vokatra amidy any amin'ny magazay dia takiana miaraka amin'ny fanambarana fampitandremana momba ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana ary koa ny laharam-pahamehana hidirana amin'ny foibe fanaraha-maso poizina.
Noraran'ny lalàna mazava ny fampiasana sary an-tsary, sary famantarana, vatomamy, sakafo, na zavatra hafa mety hahaliana ny ankizy. Ny lalàna dia mitaky ny tsy fananan-janaka fonosana - na alohan'ny hanokafana azy ireo na aorian'ny famerenany azy ireo.
Ny hany vokatra azo hanina rongony azo avela dia:
Endrika endrika mifarana amin'ny tovana -ar
Voarara ny karazana mofomamy, brownies, na vokatra fihinana hafa mitovy amin'ny sakafo.
Ny torolàlana voalohany an'ny CRC dia misy ny fepetra takiana amin'ny famokarana izay mandrara ny fampiasana ny akora rehetra izay hita fa mampidi-doza ho an'ny mpanjifa ary mametra izay azo apetraka amin'ny cartridge vape sy entana hafa.
Fahazoan'ny mpandraharaha ny indostria
Ny fitsipiky ny CRC voalohany dia manome fomba fanajana fahazoan-dàlana handinihana ireo fangatahana miverimberina hatrany, miaraka amin'ny Equity ara-tsosialy, ny faritra misy ny fiantraikany ary ny orinasa maro isan-karazany omena laharam-pahamehana mihoatra ny hafa.
Mametraka sy manasongadina ireo orinasa madinidinika, fantatra amin'ny anarana hoe "microbusinesses", ary koa ny fomba fahazoan-dàlana misy fepetra, izay manome lalana ho an'ireo mpandraharaha hiditra amin'ny tsena. Ireo mpirotsaka hofidina fepetra dia mila mandefa fampahalalana fampahalalana ambadika fotsiny, tetikady fandraharahana ary drafitra fanarahan-dalàna mifehy ny CRC.
Raha ekena izy ireo dia hanana 120 andro hamantarana ny toerana sahaza azy izy ireo, hahazo ny fankatoavana avy amin'ny kaomina, ary hangataka hivadika lisansa isan-taona. Ireo manana fahazoan-dàlana fepetra izay niova ho fahazoan-dàlana isan-taona dia tsy voatery handefa ny ampahan'ny fampiharana izay mitaky ny mpangataka hametraka traikefa mialoha amin'ny sehatry ny rongony voafehy, araka ny takian'ny lalàna. Ity fomba fampiharana azo ampiharina ity dia manome tombony lehibe ho an'ireo orinasa any New Jersey hiditra ao amin'ity tsena vaovao ity.
Microbusinesses miaraka amin'ny mpiasa latsaky ny 10 sy ny trano tsy mihoatra ny 2,500 metatra toradroa no hotohanana, ary raha mahomby dia avela hangataka hanitatra ny asany mba hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa.
Saran'ny fidirana amin'ny tsena
Ny sarany fangatahana voalohany dia natao ho lafo, manomboka amin'ny $ 100 fotsiny mba handefasana fampiharana. Ny saran'ny fahazoan-dàlana isan-taona dia manomboka amin'ny $ 1,000 ho an'ny orinasa bitika iray ka hatramin'ny $ 50,000 ho an'ny mpamboly miaraka amin'ny fahafaha-mitombo hatramin'ny 150,000 metatra toradroa.
Etsy ambany no hahitanao tabilao misy ny sarany fangatahana:
Karazana fahazoan-dàlana Fandoavana lisansa fepetra Fehezanteny momba ny lisansa isan-taona
Fahazoan-dàlana momba ny mikraoba · Sarany fandefasana - $ 100
· Saran'ny fankatoavana ny fangatahana - 400 $
· Saran'ny fandefasana fangatahana fiovam-po - $ 100
· Sarany fankatoavana ny fangatahana fiovam-po - 400 $
· Saran'ny fandefasana fangatahana isan-taona - 200 $
· Saran'ny fankatoavana fangatahana isan-taona - 800 $
· Saram-piantohana voalohany na fanavaozana ny mpamboly isan-taona - $ 1,000
· Fandoavana lisansa voalohany na fanavaozana isan-taona ny mpanamboatra rongony isan-taona - $ 1,000
· Ny vidin'ny fahazoan-dàlana voalohany na fanavaozana ny mpivarotra isan-taona - $ 1,000
· Sarany fandefasana fangatahana fiovam-po isan-taona - 200 $
· Fandoavana fankatoavana ny fangatahana fiovam-po isan-taona - 800 $
Fahazoan-dàlana momba ny rongony mahazatra · Sarany fandefasana - $ 200
· Saran'ny fankatoavana ny fangatahana - 800 $
· Saran'ny fandefasana fangatahana fiovam-po - $ 200
· Sarany fankatoavana ny fangatahana fiovam-po - 800 $
· Saran'ny fandefasana fangatahana isan-taona - 400 $
· Saran'ny fankatoavana fangatahana isan-taona - 1,600 $
· Ny saran'ny fahazoan-dàlana voalohany na fanavaozana ny mpamboly isan-taona - (Miankina amin'ny lahara, hatramin'ny $ 5,000 ka hatramin'ny $ 50,000)
· Fandoavana lisansa voalohany na fanavaozana isan-taona ny mpanamboatra rongony - (Miankina amin'ny sary efajoro, hatramin'ny 20,000 30,000 $ ka hatramin'ny $ XNUMX)
· Ny vidin'ny fahazoan-dàlana voalohany na fanavaozana ny mpivarotra isan-taona - $ 10,000
Ny fitsipiky ny CRC voalohany dia manaiky ny anjara toerana lehibe ananan'ireo tanàna amin'ny fifehezana ny sehatry ny rongony mipoitra, ary koa ny zon'izy ireo hametraka fetra ara-barotra mety amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Na dia mametraka ny fototra iorenan'ny orinasa rongony any New Jersey aza ny torolàlana an'ny Komisiona dia manana fahefana hamaritra ny fomba hitrangan'izany any amin'ny faritra misy azy ireo ny tanàna.
Ireo orinasa rongony dia mahazo alalana avy amin'ny Kaomisiona raha toa ka naneho ny fanohanany avy amin'ny kaominina izy ireo, ny fankatoavana ny zon'olombelona ary voamarina fa hiasa mifanaraka amin'ny fameperana vitan'ny tanàna.
Ny tanàna dia afaka misafidy ny ora fiasan'izy ireo, ny isany sy ny karazana orinasa manana fahazoan-dàlana miasa ao anatin'ny fari-tanin'izy ireo, ary na hanome hetra 2% na tsia amin'ny varotra rehetra eo amin'ny orinasa rongony.
Izy ireo koa dia afaka mamoaka izay takiana na fetra amin'ny orinasa rongony izay mihatra amin'ny karazana orinasa hafa, toy ny mitaky ny fanarahana ny kaody sy ny ôrdônansy mifandraika amin'izany.
Ny tanàna ihany koa dia afaka mandanjalanja izay fangatahana te-hiasa ao anatin'ny tanànany dia tokony omen'ny Komisiona fahazoan-dàlana.
Ireo fitsipika ireo dia manome boky feno momba ny fitantanana toerana misy rongony amin'ny sehatry ny rongony, saingy ilaina ny toro lalana fanampiny.
Aorian'ny fametrahana ny lalàna manan-danja indrindra, ny CRC dia hanomboka hanombatombana ny filan'ny fizarana sy ny asa fanompoana amin'ny serivisy ary hiomana amin'ny fankatoavana fangatahana.
Tags:Fitsipika rongony New Jersey